Lapha, injabulo, charm nokuzola ngokuthanda !! - I-Airbnb
Lapha, injabulo, charm nokuzola ngokuthanda !!
Pommiers Moulons, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Angèle
Yindlu ebukekayo, etholakala emaphandleni, eningizimu yeCharente Maritime, imizuzu engama-40 ukusuka eBordeaux nase-Angouleme; sizokujabulela ukwenza ukuthi uthole indawo yakithi ngaphandle kwethrekhi eshayiwe, wamukelekile !!
Itholakala enhliziyweni yeSantonge Romane, le ndlu ebukekayo isukela ngekhulu le-17, ibuyiselwe ngokuphelele kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme nezindala, ezungezwe izihlahla nezinyoni, iyakwamukela ngezandla ezimhlophe, ukuze uhlale kamnandi. Ukuzola nokuthandeka kukulindile lapha kuleli pharadesi elincane.
Bese… Kuqhele ngamakhilomitha angu-5 ukuze uphole, ulindelwe indawo yokubhukuda evulekile emngceleni womfula, izindlela zokuhamba izintaba nezinye izinto eziningi !!! wamukelekile
Njengoba ngingowokuzalwa kuleli dolobhana, ngingakuqondisa ezinhlelweni ezinhle, ukuhamba ngezinyawo, izindawo zokudlela, ukuvakasha njll ... bese futhi, ngikulungisele ukudla, njengoba ufisa, ngokwezifiso zakho, amashejuli akho, ngendawo yendawo kuphela. imikhiqizo. !!
Njengoba ngingowokuzalwa kuleli dolobhana, ngingakuqondisa ezinhlelweni ezinhle, ukuhamba ngezinyawo, izindawo zokudlela, ukuvakasha njll ... bese futhi, ngikulungisele ukudla, nje…
Hlola ezinye izinketho ezise- Pommiers Moulons namaphethelo